Ogologo nwanyi obula n'eme kwa ubochi, nlekọta ahu na ihe ndi ozo. Mana ọ bụghị onye ọ bụla n'ime ndị na-enwe mmekọahụ na-eche banyere ihe ndị a gụnyere na ngwá ọrụ ndị a na mmetụta ọ nwere ike inwe na akpụkpọ ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere parabens na Ngosiputa Ngwa.
A malitere iji Parabens na Ngosiputa Ngwa mee ihe na nso nso a. N'ịchọ inweta uru na ọchịchọ ịgbatị ndụ nke ihe ịchọ mma, ndị na-ere ihe malitere iji parabens. Paraben bụ onye nchebe nke dị irè, nke nwere nkwonkwo na mmetụta antiseptik nke na-enye gị ohere ịchekwa ihe ịchọ mma maka ogologo oge. Otú ọ dị, n'oge na-adịbeghị anya, ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo na parabens na-emerụ ahụ mmadụ ahụ.
Kedu ụdị parabens dị ize ndụ ma na-emerụ ahụ?
N'agbanyeghi na enwere umu parabens n'ime obere ogwu na shampoos, creams na ihe ndi ozo ndi ozo, ha nwere ihe nke na-achikota n'ime aru mmadu. Ndị ọkà mmụta sayensị dị na Europe egosipụtawo na ọ bụrụ na anyị abanyela akụkụ dị oké njọ n'ahụ anyị, parabens nwere ike ịmalite imetụta usoro endocrine, na-akwalite nhazi usoro ntanetị. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụdị nke parabens dị na nchacha yiri ọdịdị nke hormones nke nwanyi na estrogens. Ka o sina dị, nchọpụta a anaghị egbochi iji parabens eme ihe nhazi. Ọtụtụ ndị na-emepụta ngwaahịa na-achọpụta na nchọpụta a bụ nanị ihe efu ma nọgide na-ahapụ ngwaahịa ha na otu ihe ahụ.
Mgbu nke parabens, kwa, bụ na ihe ndị a na-emekarị ka mmadụ nwee nsogbu nrịanrịa siri ike.
Ngosiputa Ngwa na-enweghị parabens
Mgbe a chọpụtachara ndị ọkà mmụta sayensị Europe, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa malitere ịkwado ihe ịchọ mma nke nwere parabens, ụfọdụ na-akwụsịkwa iji ya eme ihe.
Ndị ọkachamara na-atụ aro ịghara ịtụ ụjọ ma ghara ịkọpụta ihe ọ bụla nke ịchọ mma. Ka o sina dị, ndị na-achọ ịgbanwe ọkụ na ncha, ude na ihe ịchọ mma ndị ọzọ na-enweghị parabens, ị kwesịrị ịṅa ntị na ọnụnọ nke aha pụrụ iche na ngwugwu. Ụfọdụ ndị na-emepụta ihe, ka ha wee ghara ịhapụ ndị ahịa ha, na-emepụta ihe ntanetị pụrụ iche, nke parabens anaghị adị. Na ụdị ngwá ọrụ ọ bụla ị nwere ike ịchọta ihe nkwụnye "enweghị parabens".
Mmiri ndị na-enweghị sulfates na parabens pụtara n'ahịa ndị na-elekọta ntutu isi. Sulphates bụ ihe ndị na-eme ka ụfụfụ dị na ntutu. E nwebeghị ihe ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara mmetụta ọjọọ ha n'ahụ anụ ahụ, ma ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị nke Europe na-ekwu na mmetụta nke sulphates adịghị njọ karịa nsogbu nke parabens.
Iji kpochapu kpamkpam ohere nke mmetụta ọjọọ nke parabens na ahụ, ọ dị mkpa ịṅa ntị na ihe mejupụtara nke ọ bụghị nanị creams na shampoos. E kwesịkwara ịzụta ya ezé na deodorant n'enweghị parabens. Enwere ike ịchọta akwa na-enweghị parabens na ndị na-arụpụta ụlọ na ndị Europe. Dịka ọmụmaatụ, Predotte Veled dị iche na ogo na enweghi parabens.
"Ndi parabens na-emerụ ma na-azụta ego na ihe ha mejupụtara?" - onye ọ bụla kwesịrị ịza ajụjụ a maka onwe ya, ebe ọ bụ na ọ maara ihe niile dị na mbụ banyere ihe ndị a. N'ọnọdụ ọ bụla, ị kwesịrị ịmara na ọ bụ naanị ụdị ọgwụgwọ ndị a họọrọ n'ụzọ ziri ezi dabere na ahihia na ihe ndị ọzọ e kere eke na-adịghị njọ.
Nsogbu akpụkpọ ihu - ọgwụgwọ
Anya nku ugha, esi eji ya?
Ihe na-eme ka ihe na-esi ísì
Esi mma maka ihu kama ude
Nri ehihie maka anya anụnụ anụnụ
Ejiji maka anya anụnụ anụnụ
Ezigbo mmanụ lemon
Osisi akwukwo site na otutu
Ịgba afa na Christmas Eve maka ọdịnihu
Ememe ndị Kraịst
Mmanụ nkedo maka nku anya
Green tomato maka oyi - usoro nhazi dị mfe maka ezigbo nchekwa ụlọ
Chikasị bisikiiki - uzommeputa
Nail ndọtị na ndụmọdụ
Kedu otu ị ga - esi ahọrọ ígwè?
Ụbọchị ụbọchị Belgium
Salad "Neptune" na squid
Nri oriri nwere vitamin K?
Mmega ahụ maka abụba ọkụ